I-ClearSlide: Ipulatifomu Yokwethula yokuNika amandla Ukuthengisa | Martech Zone
I-clearSlide: Ipulatifomu yesethulo yokunikwa amandla kokuthengisa
NgoLwesihlanu, Mashi 27, 2015 Douglas Karr
Ngokocwaningo olwenziwe ngu Forrester, Amaphesenti angama-62 abaholi bezentengiso bafuna ukubonakala okuningi kumsebenzi wokuthengisa, futhi kuphela ngamaphesenti ayisithupha aqiniseka ukuthi athola ukuqonda okunembile. Ngenxa yalokho, abaholi bezentengiselwano balwela ukuqonda ukuthi iziphi izinqolobane, amaqembu, nokuqukethwe empeleni okusebenzayo kumjikelezo wokuthengisa - okungenani kuze kube yilapho amathuba etholwa noma elahlekile.
I-ClearSlide, ipulatifomu yesethulo enikwe amandla okuthengisa, ikhishiwe ukuzibophezela futhi Landela, izici ezintsha ezisiza abaholi bezentengiso ukuqapha, ukuhlaziya, nokwenza ngokusebenza kwedatha yokusebenza kokuthengisa.
Abaholi bezentengiso basebenzisa I-ClearSlide Ukuzibandakanya nokuLandela ukuqapha izindawo zokuthengisa ezibucayi:
Imisebenzi Yokuthengisa - Ukuphathwa kwezentengiso kungaziswa lapho abasebenzayo benemihlangano yokuthengisa nalapho bethumela ama-imeyili wamakhasimende, ngenhloso yokuthi yiziphi izinto ezihlanganisiwe. Lokhu kungasiza ekuqeqesheni kwabo abaphathi nabasebenzi futhi kusize ekuboneni ukuthi yini esebenzayo nokuthi iziphi izivimbamgwaqo zokuqhubekisela phambili ibhizinisi.
Ukuzibandakanya Komthengi - Ukuphathwa kwezentengiso kungabona ukuthi ama-akhawunti akuphendula kanjani okuqukethwe. Lapho belandela ama-akhawunti, bathola izaziso ezisheshayo lapho okuqukethwe kuvulwa nokuthi singakanani isikhathi amakhasimende asichitha enza okuthile. Kwemihlangano eku-inthanethi, i-ClearSlide ibala ukuthi umhlanganyeli ngamunye uzibandakanye noma uphazamise kangakanani ezingeni le-slide-by-slide. Le datha bese ihlanganiswa ibe yisilinganiso sokubandakanya amakhasimende jikelele, esingabekwa uphawu kwamanye amathuba abathengisi abasebenzayo.
Okuqukethwe - Ukuphathwa kwezentengiso kungabuka ukuthi yikuphi okuqukethwe kokuthengisa nokumaketha okuhambisana namazinga aphezulu wokuzibandakanya. Bangakwazi ukufundisa abathengisi ukuthi basebenzise okuqukethwe okuhle kakhulu futhi baxhumane nokumaketha ukuze bathuthukise imiyalezo.
Ukuzibandakanya nokuLandela kuzosiza abaholi bezentengiso bathole ukuthuthuka okuqhubekayo kuyo yonke inhlangano yabo. Siklame leli thuluzi ukunika abaholi bezentengiso ukubonakala abakudingayo ukuguqula isu lokuthengisa ngokususelwa kudatha enzima. Zisebenzisa i-Engagement and Follow, izinhlangano zokuthengisa zizokwazi ukusebenzisa kahle isikhathi sazo nesikhathi samakhasimende abo. URaj Gossain, i-VP yoMkhiqizo, iClearslide.
Ukubuka konke kwe-Clearslide
Ipulatifomu le-ClearSlide linikeza abaholi bokuthengisa ukuqonda ngomsebenzi wesikhathi sangempela wamaqembu abo futhi linikeza ngokujulile analytics mayelana nezinhlobo zokuqukethwe ezigcina zithinta kakhulu amakhasimende. Kubasebenzi bokuthengisa, i-ClearSlide ivumela ukuxhumana okulula namakhasimende namathemba, kungaba ku-inthanethi noma ngaphakathi, kusetshenziswa izinhlelo zewebhu ze-ClearSlide noma ezeselula.
Tags: i-clearslidelwekucocisanalandelaipulatifomu yesethuloukuzibandakanya kokuthengisaubuholi bokuthengisaukuphathwa kokuthengisa
Yiziphi izinto ze-Best Facebook Contest Apps?
U-Lyris Uqala Ukuzenzela Okuqukethwe Okuzenzakalelayo